Oge Maka Ndụmọdụ Site na Semalt - Ebumnuche SEO Iji Tụlee
Mgbe a na-eche echiche banyere SEO, ihe abụọ bụ isi nke gafere uche anyị bụ isiokwu na backlinks. Ka Google nọgidere na-eme ka nghọta nke àgwà ụmụ mmadụ dịkwuo mma, o meela atụmatụ ụfọdụ ma gbanwee ihe ọ weere dị ka ọkwa dị ogo. The engines search ugbu a na-enye UX dị ukwuu anya dị ka o kwere mee.
Ivan Konovalov, onye ọrụ ọkachamara nke sitere na Semalt Digital Services, na-emesi obi ike na tweaks ndị a nwere ike ịme ka ị jiri usoro SEO ọhụrụ ndị Google nyere.
Tactic # 1. Nzere ngosi na mgbasa ozi mmadụ
E gosipụtarala ugbu a na oghere mmeghe na mgbasa ozi ọha na eze bara uru ma dị mma karịa usoro dị mfe. Ị nwere ike ịnwe mmadụ ole na ole Facebook bụ ndị na-ede akwụkwọ na-adịghị ala ala. Ebumnuche bụ ịkọrọ ụfọdụ ozi dị ike na ịntanetị, a kpọkwara ya dị ka Open Graph. N'ụzọ dị nro, ọ dị maka ndị Twitter na ndị Facebook ma nwee ike ịbawanye arụmọrụ nke ebe nrụọrụ weebụ gị. Nsipụta Open na-akwusi site na ọdịnaya nke saịtị gị ma na-egosiputa ya na mgbasa ozi mgbasaozi n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ọ na-enyere gị aka ịbawanye ogo na nhụwapụta nke ebe nrụọrụ weebụ gị, Google nwekwara ike ịdọrọ Open Graph ọdịnaya n'ụzọ dị mma.
Tactic # 2. Dezie faịlụ robots.txt
Mgbe spiders search engines na-enyocha site na weebụsaịtị, ha na-achọkarị faịlụ robots.txt n'oge usoro a. Ọ dị mkpa ịghara inye ha ntụziaka na-eduhie eduhie. Ọ bụrụ na ịchọtala okporo ụzọ a na-enweghị ike ịchọta, ị kwesịrị ịlele faịlụ robot.txt, hụ na ha ziri ezi. Ọzọkwa, ị nwere ike ijikwa otu ụzọ nrụọrụ weebụ na-esi edepụta mkpokọta weebụ gị nakwa nke ibe ya ekwesịghị ịdekọ aha n'ihi ọdịnaya dị ala..N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị nwere ike ikwu na ị kwesịrị idozi faịlụ robots.txt gị ma kwụsị spam na bọọlụ site n'ịkụtu ibe gị.
Tactic # 3. Ntughari isiokwu na-enyere Google aka ịghọta weebụsaịtị
Ọ gaghị abụ ihe ọjọọ ịsị na mkpado isiokwu na-enyere engines ọchụchọ aka ịghọta saịtị gị n'ụzọ ka mma. Ịmekwu ihe na ịkọwa ọdịnaya gị, ọ ga-adịrị mfe maka engines na-achọ ya iji bulie ya na ahụmịhe kachasị mma ndị ọrụ ga-enwe. Ngwongwo ọchụchọ tinyere Google mara mgbe ndị ọrụ na-enwe mmasị na ọdịnaya nke ebe nrụọrụ weebụ, na-akwụghachi ya ụgwọ. Google nwere ike ịkwalite ogo saịtị gị nanị mgbe a kwadebere akụkọ UX n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Jide n'aka na ị na-eji mkpado nkụnye eji isi mee mee ihe ma nyere aka nyochaa Google na nyochaa saịtị gị.
Tactic # 4. Jiri Google site na ngwaọrụ ha
Ntanetị ọrụ weebụ nke Google nwere ike iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị rụọ ọrụ karịa karịa. Ọ na-eme ka atụmatụ SEO gị dị ukwuu. Ngwaọrụ dịka Google's Search Console nwere ike iji mee ihe mgbe niile. Ngwaọrụ ndị a na-enyere gị aka nyochaa otú esi etinyere saịtị gị ma nye ihe ọmụma banyere usoro atụmatụ SEO gị. Ị nwere ike iji ọrụ n'efu nke Google ma nyefee saịtị ahụ ozugbo na engines ọchụchọ. Nke a ga - ekwe ka ha na - edepụta ibe weebụ gị ngwa ngwa, ị gaghị echere ogologo oge.
Tactic # 5. Lelee plugins na saịtị mmelite ọhụrụ
I kwesịrị ile anya na ntanetị ọhụrụ na nkuzi. Gbaa mbọ hụ na ọsọ ọsọ, igodo, imewe, na ngosi gị na ebe nrụọrụ weebụ dị na akara ahụ ma jikọta echiche nhazi nke Google. Fọrọ nke nta ka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ weebụ niile na-emezi ndebiri ha na plugins na mgbe niile. I kwesịkwara ime otu ihe ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwalite UX na saịtị ahụ, rụọ ọrụ ya na visibiliti ya.
Tactic # 6. Na-eche maka ozugbo: Google na Facebook
Isiokwu Facebook Instant, Apple News na Google AMP ndị kachasị mma na ndị na-eduzi ngwá ọrụ na ịntanetị, na-ekwe nkwa nhazi na ịdị ọcha maka ebe nrụọrụ weebụ gị na ime ka oge ọrụ ahụ dị oke.
A naghị eduzi ndị ọrụ Facebook mgbe ha na-etinye njikọ ndị ahụ, mana ọdịnaya nke ebe nrụọrụ weebụ gị na-egosi na ọ dị oke nhazi. Ọtụtụ ndị nkwusa na-eji usoro a eme ihe ma mụbaa okporo ụzọ nke saịtị ha, meziwanye ọnọdụ nyocha ya.
Ma ị na-eji usoro ndị a niile ma ọ bụ họrọ naanị otu n'ime ha, ị ga - ahụ na saịtị gị na - eme ka njirikwuo search engine dị elu Source .